Fangalarana voan-kafe niteraka famonoana: naiditra am-ponja vonjimaika ilay katekista sy ny namany iray | NewsMada
Fangalarana voan-kafe niteraka famonoana: naiditra am-ponja vonjimaika ilay katekista sy ny namany iray
Par Taratra sur 31/10/2019
Miandry ny fitsarana azy any am-ponja ilay katekistan’ny fiangonana iray namono tamin’ny fomba feno habibiana ny mpiasa tao aminy. Asa ratsy niarahany tamin’ilay mpiandry omby sy mpiasa hafa izao niarahana nanatanteraka izao.
Naiditra am-ponja vonjimaika ilay katekistan’ny Fiangonana Anglikana ao Imerimandroso, Ivato rehefa natolotra ny fampanovana, omaly. « Ilay mpiandry omby ihany koa naiditra am-ponja raha nahazo fahafahana vonjimaika kosa ilay mpiasa hafan’ity mpitondra fiangonana ity » hoy ny zandary misahana ny raharaha. Fantatra fa isan’ireo voarohirohy tamin’io tranga io ireo lehilahy roa ireo tamin’ny vono olona feno habibiana, ny 21 oktobra teo. Voalaza tamin’izany fa nangalatra voan-kafe tao an-tsenan’ilay katekista ny lehilahy 35 taona mpiasany ka novelesiny tamin’ny hazo vaventy ny lohany ary naratra mafy. Notsaboiny sy nafenin’ilay katekista, 45 taona ity tao an-tranony anefa ilay niaram-boina nandritra ny roa andro taorin’izay. Nihamafy anefa ny ratra nahazo ilay lehilahy ka noentin’ilay mpampiasa azy nihazo ny Hopitalin’Ampefiloha, ny 24 oktobra teo. Namoy ny ainy teny an-dalana anefa ilay niharam-boina vokatry ny ratra mafy nahazo azy, ny alin’io fotoana io. Nentin’ilay katekista nihazo an’i Fandrina ny vata-mangatsikan’ilay lehilahy ny 25 oktobra ka natolony ny fianakaviany, ary nohazavainy fa niharan’ny fitsaram-bahoaka no antony nahafaty ny lehilahy. Nino ireo voalazan’ilay mpitondra fiangonana ireo fianakavian’ilay niharam-boina taorian’ny lainga tsara lahatra nataony.
Efa fanindroany ny fihetsika tahaka izao
Tonga namonjy ny zandarimarian’Imerimandroso ny sefo fokontany ao an-toerana ary nanazava ny zava-nisy marina niseho ka nosamborina ireo olona telo voarohirohy tamin’ny asa ratsy, isan’izany ilay katekista. “Novonoin’ilay mpampiasa azy ihany io olona maty io. Malahelo izahay amin’izany vono olona feno habibiana izany” hoy i Herinjaka, mponina ao Imerimandroso. Nohamafisin’izy ireo tamin’izany fa fanindroany no nanaovan’io Katekista io izao asa ratsy izao. Raha ny fanazavan’ny zandary, ny taona 2016 no efa namono ny mpiasany hafa ny mpitondra fiangonana izay novelesiny tamin’ny hazo vaventy ihany koa, izao izy voasaringotra amin’ny raharaha hafa izao indray. Fantatra fa efa niasa tao amin’ny fiangonana Anglikana Belanitra ny lehilahy.